I-bungalow entsha kufutshane neLong Bridge
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguShane
Ikhaya elisanda kwakhiwa elinamagumbi amabini elikwimizuzu embalwa ukusuka kwiibhari, iindawo zokutyela kunye nolwandle lwaseDetroit Lakes. Ikhaya libonelela ngepatio egqunyiweyo kunye negadi ejonge emazantsi i-pergola. Indawo yokuzonwabisa ekhululekileyo enegumbi lokuhlala elivulekileyo kunye nekhitshi. I-sofa ekhululekile kwigumbi lokuhlala. Indawo yokuxhoma yegaraji enkulu enamagumbi amabini aneTV, ibhedi enkulu kunye netafile yefoosball. Indawo yokupaka iimoto ukuya kutsho kwezine. Indawo yokutyela edumileyo yaseLong Bridge kunye ne-pier kumgama nje wemizuzu emi-2. Ukuqaliswa kwesikhephe kufutshane.
Iphasiwedi yeWifi iyafumaneka kwincwadi.
Kuba silawula ipropathi ukude, sineekhamera ezimbini zokhuseleko zangaphandle ezikumnyango wangaphambili nakumnyango ongasemva. Asinamdla wokubukela uqikelelo lwethu, nangona kunjalo kufuneka sibe nokhuseleko oluthile ngelixa singekho. Iikhamera ziyashukunyiswa kwaye emva koko ziye zingasebenzi kwimizuzwana engama-30.
Ikhaya kufuphi neLong Bridge, ibha edumileyo kunye nendawo yokuqubha, kunye neShorewood Pub, ibha yokuntywila ixesha elide kunye neziko lendawo. Kukho kwakhona isikhephe ezantsi kwendlela ukuba uzisa isikhephe sakho. Ikhaya likwakuhambo lwemizuzu emi-4 ukuya e-WE Fest/Soo Pass Ranch. Iishuttles/iiLyft ziyafumaneka. Imivalo ephuma elunxwemeni ibandakanya iLakeside, iZorbaz, kunye neHub 41. Ukutya okugqwesileyo / isidlo kwi-Fireside kunye neRosiwe. Intandokazi yendawo nguMiguels yeetaco zenkukhu. Ikhaya limalunga nemizuzu eyi-7 ukuya kwiHotele Shoram, enye igugu elifihlakeleyo lendawo. Abadlali begalufa bayakonwabela umgama wemizuzu emi-5 ukuya kwiKlabhu yelizwe laseDetroit Lakes kunye neKhosi yeGalufa.
Iindwendwe zinokuthumela umyalezo okanye zinditsalele umnxeba kwiseli yam ukuba zinemibuzo okanye naziphi na iingxaki:2068890929.